IBrussels ihlumela i-casserole ngama-apricots > Ukudla ngesifo sikashukela
AmaBrussels amahlumela ne-bacon casserole
Konke Mayelana nesifo sikashukela »Brussels Sprouts Casserole with Apricots
Iresiphi yanamuhla ye-carb ilingana kahle nesigaba esithi "Namuhla Angifuni Ukupheka". Ungapheka i-casserole bese uyigcina izinsuku ezimbili.
Vele, kufanele uqaphele ukuthi ungasidli sonke isidlo ngasikhathi sinye, ngoba kuyintokozo emsulwa. Noma vele uthenge isidlo esikhulu sokubhaka. Kunoma ikuphi, sikufisela okuhle kodwa ungakujabulela ukupheka!
Amagremu angama-400 we-Brussels amahlumela (amasha noma aqandisiwe),
200 amagremu kakhilimu
Amagremu ayi-150 wama-apricots (kuya ngesizini: ekheniwe, emisha noma eqandisiwe),
Amagremu ayi-150 we-Emmentaler yashizi,
Amagremu ayi-125 we-sausage eluhlaza obhemayo (osikwe ku-cubes),
1 isipuni oregano
1 isipuni se-rosemary,
1 isipuni se-zira
1/2 isipuni se-natimeg,
1 isipuni se-paprika
usawoti kanye nopelepele ukunambitha,
Amagremu angama-500 enyama eyosiwe (ukunambitha kwakho).
Izithako ezenzelwe ama-4 servings.
Kwi-casserole, amahlumela eBrussels kumele kuqala akhanyiswe. Ukuze wenze lokhu, bilisa amanzi anosawoti bese ubeka amakhanda eklabishi lapho. Lapho amanzi ebilisa futhi, yehlisa ukufudumeza kube ubuncane bese ubilisa imizuzu eyi-10. Masishintshe iklabishi elibunjiwe ngokushesha emanzini abandayo, futhi lapho libanda, liphonse ku-colander ukuze amanzi angilazi ngokuphelele.
Cola kahle imichilo ebunjiwe ebhekeni
gazinga epanini elishisayo (ngaphandle kwamafutha).
Amagabhele eklabishi ngalinye ahluma asikwe ezingxenyeni ezingama-4-8 (kuya ngosayizi).
Endishini, hlanganisa ubhekeni othosiwe, amahlumela eBrussels, usawoti, upelepele ukunambitha. Faka imayonnaise encane, ushizi ogayiwe kanye ne-breadcrumbs.
Gcoba isikhunta esingamelana nokushisa ngamafutha zemifino, ugcwalise ngeklabishi nangebhasikhi. Fafaza ngengxube ye-breadcrumbs noshizi. Bhaka kuhhavini oshaqwe u-180C imizuzu engaba ngu-20.
ICasserole enamahlumela ama-brussels nenkukhu
AmaCasseroles ayisivakashi esivame kakhulu endlini yami. Ngipheka i-curd nezithelo zokudla kwasekuseni, nenyama noma inhlanzi ngesidlo sasemini, nemifino elula yesidlo sakusihlwa. I-Casserole isitsha esisebenza ngezinto eziningi, singalungiswa kusuka kunoma yimuphi umkhiqizo. Imenyu yanamuhla casserole nge amabhlogo ayahluma nenkukhu. Isikhathi eside bengingakwazi ukuqonda ukunambitheka kwamahlumela amaBrussels, kodwa bekulesisitsha lapho angidlalele khona ngamanothi amasha.
Preheat kuhhavini abe ngama-degrees angama-180.
Susa amaqabunga acekecekile noma amabi kumaBrussels amahlumela bese uwasha kahle ngamanzi abandayo.
Bilisa iklabishi enanini elikhulu lamanzi anosawoti cishe imizuzu emi-5. Bese ukhipha bese ubeka eceleni.
Manje cwilisa u-anyanisi bese uyinquma kuma-cubes amancane kanye gazinga epanini elincane elinamafutha omnqumo.
Faka i-sausage ebunjiwe kanye neklabishi ku-anyanisi bese uthosa kancane.
Sauté iklabishi kancane
Hlanganisa inyama egayiwe ne-oregano, paprika, irosemary, imbewu ye-caraway ne-nutmeg. Faka upelepele nosawoti ukunambitha. Faka u-anyanisi othosiwe, isoseji kanye neBrussels amahlumela enyama egayiwe bese uxuba kahle.
Shaya amaqanda amabili esitsheni esiphakathi bese ushaya ngo-ayisikhilimu. Hlanganisa nengxube nenyama egayiwe. Sika ama-apricots abe yizicucu bese ufaka ingxube.
Faka indishi esitsheni esikhulu sokubhaka, ufafaze nge-Emmentaler noma olunye ushizi ekunambithekeni kwakho. Bhaka cishe imizuzu engama-30 kuhhavini. Isitsha sesilungile!
I-anyanisi uthathe izindandatho ezingxenyeni. Fudumeza uwoyela wemifino epanini lokuthosa, gazinga u-anyanisi kuze kube nsundu wegolide.
I-Thaw Brussels ihluma, engeza u-anyanisi. Fry imizuzu engu-5-7 ngaphezulu kokushisa okuphansi.
Pheka kuqala isicubu senkukhu emanzini anosawoti, uthathe izingcezu eziphakathi nendawo, engeza epanini. Cima imizuzu eyi-10 phezu kokushisa okuphansi. Usawoti, upelepele, engeza amakhambi anamakha ukunambitha, hlanganisa.
Faka imifino enenkukhu esitsheni sokubhaka esigotshwe ngamafutha yemifino.
Thela i-casserole ngo-ukhilimu (ngine-10%).
Fafaza ushizi ogayiwe ngaphezulu. Preheat kuhhavini abe ngama-degrees angama-180, faka i-casserole kuhhavini imizuzu engama-20, kuze kube yilapho sekuhlangana amagolide.
I-casserole emnandi futhi enempilo enamahlumela ama-brussels futhi inkukhu isilungile.
Izithako eziphambili zale casserole ziyizinhlobo ezi-3 zeklabishi: i-cauliflower, i-broccoli ne-Brussels amahlumela. Okwengeziwe - ushizi onzima, amaqanda nobisi. Ukudla okuncane kwenza isidlo esimnandi. Okuhlwabusayo, okunempilo, hhayi okunamafutha kakhulu. I-casserole ibukeka igqamile futhi ibukeka etafuleni. Kuzothatha isikhathi esincane ukuyipheka: unikezwe imizuzu engama-35- 40 nesitsha esimnandi esehlangothini noma inkambo yesibili ephelele yesidlo sasemini.
Zoya, intombazane enhle enhle ngemibala yasekwindla! Okokuqala ngifuna ukuyeka ukubheka, bese ngizama уже
Ngiyabonga, Nadya !! Okokuthi ngubani othanda iklabishi iresiphi.
Ngithanda zonke izinhlobo iklabishi, i-casserole iyamangalisa!
Ngixhawula isandla sakho! 😉 Futhi ngithanda zonke izinhlobo zeklabishi.
Casserole omuhle. Futhi umdwebo osefomini unomusa😊
Ngiyabonga !! Ngithanda nesimo. 😋
Ukusikwa kwe-casserole kuhle kakhulu. Simnandi futhi siphilile !! 😊
Ngiyabonga kakhulu. Futhi hhayi phezulu kakhulu kilojoule.
Ake ungitshele, kungenzeka yini ukuthi ungabilisi iklabishi kuqala? Ngiyabonga
Uma ungabilki iklabishi ngaphambili, khona-ke izoba lukhuni. Ngemuva kwakho konke, imizuzu engu-15 ukuya ku-20, ayibhaka kuhhavini, kwanele ukulungiselela amaqanda ngobisi. Kuzovela iklabishi eluhlaza enamaqanda nobisi. 😳
Ngithanda zonke izinhlobo iklabishi! Futhi kunokuningi lapha - okumnandi kakhulu!
Nami futhi, Tanya. Kepha empeleni, izinhlobo zeklabishi zingashintshwa ngokuba khona kwesiqandisi.
Zoya! Isitsha esinjalo esami! Ngithanda zonke izinhlobo iklabishi!
Ira, ngiyabonga !! Ngijabule ngithande isidlo.
futhi ngingumuntu othanda iklabishi, emndenini wami kuphela ngiyamthanda, ngisebenzela abanye i-sauerkraut kwabanye! 😍 UZoya, unambitheka kakhulu!
Izame, Elena !! Ubukeka njengephayi. Ungangeza ezimbalwa wezipuni zikafulawa ekugcwalisweni.
I-Zoyochka, iresiphi emnandi! Ngiyaqiniseka ukuthi imnandi kakhulu futhi ngiyithanda kakhulu iklabishi! 😍
Ngiyabonga, Lika othandekayo. 😍
Ngiyawathanda ama-casseroles anjalo! Isithombe sokugcina sihle kakhulu)
Ngiyabonga, ujabule ukuthi ngiyithande i-casserole.
kuhle futhi kumnandi kanjani!
Ngiyabonga kakhulu ngeresiphi! Ngokweqiniso angiyena fan omkhulu wekholifulawa. Kepha nangu umama ethandana nale iresiphi ngokubheka isithombe)) Sapheka futhi sajabula. Izimpahla. 😋
Ujabule kakhulu !! 💐 Lungela impilo.
2 amahora 8 edlule
Emahoreni 4 9 edlule
Emahoreni ayi-10 10 edlule
Sebenzisa enye yama-akhawunti wakho wokuxhumana nabantu ukungena ngemvume.
Hhayi ilungu manje? Bhalisa
Ngemuva kokubhaliswa, zonke izinsizakalo zesayithi lethu zizotholakala kuwe, okungukuthi:
I-cookbook yokugcina izindlela.
Ikhalenda lokwenza uhlu lokuthenga ngezinongo.
Futhi, ngemuva kokubhalisa, ungabamba iqhaza ezingxoxweni zokupheka, amathiphu, kanye nokubuza imibuzo yakho.
Ukuze ube yilungu lomphakathi, kufanele ubhalise esizeni ngokugcwalisa ifomu elilula, ungangena futhi esizeni usebenzisa izinkundla zokuxhumana i-Facebook, Vkontakte, Twitter.